Amaxabiso kunye namaxesha okuhambisa | Ukubhala ghost kwizifundo | Ipapernerds
Amasebe kunye namaxesha
Yenza uphando ngokukhawuleza kwaye ngokulula!
Siza kukunceda ubhale eyakho ngokukhawuleza kwaye ngexabiso eliphantsi umsebenzi wezenzululwazi
Ukubhalwa kwesiporho kuwo onke amasebe-amaphepha ekota, i-bachelor theses, master theses nokunye okuninzi.
Ukubhalwa kwesiporho kudala ukhuseleko nenkululeko
Njengabathengi bethu iarhente yesiporho eyaziwayo sihambisa kuphela ezizodwa zenzelwe wena yenzululwazi umsebenzi. Ababhali bethu zivelise ngokuchanekileyo Iimfuno zakho kwaye Iimfuneko on.
Sigubungela yonke imisebenzi kwaye sibhala umsebenzi wesayensi kule imfutshane Umsebenzi wasekhaya okanye Amaphepha ekota malunga ithisisi yesidanga ngokulandelelana ithisisi yenkosi okanye Ithisisi ukuya kuthi ga ngokugqibeleleyo eBooks.
Sisoloko sinabathengi abaxela amava amabi kunye nabanye ababoneleli kwaye bonwabile ukukhangela iqabane elithembekileyo leprojekthi yabo. Iiarhente ezingabizi kakhulu zihlala zigunyaziswa. Ixesha lokuqhubekeka elisekho lihlala lifutshane.
Siyabathanda abathengi bethu kwaye sifuna ukukunika eyona nkonzo intle. Ingxelo entle evela kubathengi iyakungqina oku.
Amaxabiso ayahluka ngokweemfuno kunye nomhla wokuhanjiswa komsebenzi. Ixabiso lokucaciswa lijikeleze ii-euro ezingama-52,39-85,89 kwiphepha ngalinye.
Umsebenzi wendlu Izicwangciso zeshishini Umsebenzi weprojekthi ithisisi yenkosi Umxholo umsebenzi onobuchule ithisisi yesidanga Ithisisi Ithisisi Ingcebiso kagqirha libeke Iphepha ukulungiswa Ukufunda kwakhona ukukopa ulwakhiwo abaqeqeshi Ukudibanisa Ebook Incwadi ekubhekiswa kuyo Umsebenzi wophando isihloko Umsebenzi wasekhaya Abstract Ukunikezela Iphepha lekota Isihloko esicetywayo Inguqulelo Amanqaku okufunda Inkcazo-ntetho Iskripthi Umsebenzi wesifundo biography
H Umsebenzi wendlu Iintsuku eziyi-8-14 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
B ithisisi yesidanga Iintsuku eziyi-14-31 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
M ithisisi yenkosi Iintsuku eziyi-21-31 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
G Thetha nombhali wakho imizuzu 20 Cela ngoku!
S Iphepha lesemina Iintsuku eziyi-8-14 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
F umsebenzi onobuchule Iintsuku eziyi-8-14 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
D Ukudibanisa ngabanye Cela umsebenzi!
E Ithisisi Iintsuku eziyi-14-21 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
P Umsebenzi weprojekthi Iintsuku eziyi-8-14 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
P Ingcebiso kagqirha imizuzu 20 Cela ngoku!
E Ukubhengeza dissertation Iintsuku ezingama-21-31 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
P Iphepha Iintsuku eziyi-21-31 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
B Isicwangciso seshishini Iintsuku eziyi-8-14 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
E Umxholo Iintsuku eziyi-8-14 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
S Ukukopela kwintetho yasimahla ukusuka kusuku lwe-1 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
E Umsebenzi wokungenisa ukusuka kwiintsuku ezisi-7 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
D Ithisisi Iintsuku ezingama-21-31 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
E Ukubhengeza umsebenzi wasekhaya ukusuka kwiintsuku ezisi-7 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
E Ukubhengezwa kwithisisi ye-bachelor ukusuka kwiintsuku ezisi-7 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
F Into yokuphonononga ukusuka kwiintsuku ezisi-7 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
F Umsebenzi wophando ngabanye Cela umsebenzi!
A isihloko ukusuka kwiintsuku ezisi-8 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
H Umsebenzi wasekhaya ukusuka kusuku lwe-1 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
А Abstract ukusuka kwiintsuku ezisi-7 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
H Ukunikezela ukusuka kusuku lwe-5 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
D Iskripthi ukusuka kwiintsuku ezisi-8 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
B biography ukusuka kwiintsuku ezisi-8 okanye ngokwahlukeneyo Cela umsebenzi!
K Ukulungiswa kunye nokuhlaziywa komsebenzi wakho ogqityiweyo ukusuka kusuku lwe-1 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
L Ukufunda kwakhona ukusuka kusuku lwe-1 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
T Isihloko esicetywayo ukusuka kwiintsuku ezisi-7 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
G ulwakhiwo Iintsuku ezingama-7 okanye umntu ngamnye Cela umsebenzi!
K Umsebenzi wesifundo Iintsuku ezingama-8-14 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
P umboniso ukusuka kwiintsuku ezisi-7 okanye ngokukodwa Cela umsebenzi!
B Izicelo ukusuka kwiintsuku ezi-2-7 okanye ngokwahlukeneyo Isicelo sesicelo!
Ngaba umsebenzi owufunayo awudweliswanga? Ungathandabuzi kwaye Qhagamshelana nathi apha!